China na-ebipụta ink karama plastic silinda flatbed UV ngwa nbipute emepụta na suppliers | Maishengli
Nzipu doo ndu okporo ígwè cross doo akara aluminum doo X axis na-ekwe nkwa site Japanese THK abụọ linear ndu nnyefe ngwaọrụ Cartridge ink na-agba ọsọ nke ọma n'oge ibi akwụkwọ
Nke ise, ihe ndị nwere foto ahụ mgbe UV na-ebipụta akwụkwọ enweghị nsogbu ọ bụla, ọ dị mkpa ịtụle ma ọ bụ ihe kpatara eserese ahụ n'onwe ya, ọ bụrụ na eserese n'onwe ya nwere pikselụ nkịtị, yabụ na ọ gaghị enwe ezigbo mbipụta akwụkwọ. . Ọbụna ma ọ bụrụ na foto a nụchara anụcha, ọ na-apụghị nweta elu àgwà ebipụta na-arụpụta.
Acryli, iko, taịliki seramiiki, osisi, efere ọla, eriri achara, akwa a kwụsịrị, akwụkwọ, akpụkpọ anụ, akwụkwọ ahụaja, akwa, nkume, PVC, kapeeti, bọọdụ chevron, plexiglass, enwere ike bipụta ya na ndị na-eme ihe mgbe niile, dị ka karama Wine ma ọ bụ ịkwanyere mmiri anwụrụ wdg.
5 isi atụmatụ:
Ngwurugwu ígwè nile na-eme ka ọrụ dị n'otu.
2. Ugboro abụọ nsogbu nrụgide na-akwado. Chebe usoro obibi akwụkwọ site na enweghị agba.
3. Ugboro abụọ ikanam mmiri jụrụ ịgwọ oriọna. Mejuputa otutu uzo obibi.
4.Fine akụkụ iji hụ na obibi akwụkwọ zuru oke na ogo dị elu.
5. High-Tec ike isi osisi, adaba maka ngwa nbipute ọrụ.
Gịnị bụ ọrụaka isi ike nke mgbasa ozi UV efere ebi akwụkwọ igwe?
1. Usoro a dị mfe ma belata ego
Omenala silk ihuenyo ebi akwụkwọ, nyefe-ebi akwụkwọ na ndị ọzọ na zhi ebi akwụkwọ usoro usoro na-gbagwojuru anya, na ihe nkiri, na ihuenyo ebi akwụkwọ, efere Ndinam, wdg na-eri oge na-arụsi ọrụ ike. UV na-ebipụta akwụkwọ chọrọ naanị ịtọba ihe dị na tebụl akụrụngwa na kọmputa amalite mbipụta. Otu mpempe akwụkwọ a ghọtara, ọrụ ahụ dị mfe ma naanị otu onye na-achịkwa; ebi akwụkwọ na-eri na-ebelata ka yuan 4.
2. Ngwa sara mbara
Omenala obibi nwere ike ibipụta ihe ndị dị nro dịka akwụkwọ na akwa. Ndị na-ebi akwụkwọ nke UV anaghị ahọrọ ihe, ma nwee ike ijikwa ma dị nro ma sie ike.
3. Mmetụta ka mma
Omenala ebi akwụkwọ mgbe mkpa ka a ugboro ugboro ọtụtụ ugboro iji wuchaa ebi akwụkwọ, na ọ dị mfe iwepụ mmetụta mgbe a ugboro ole na ole; UV flatbed ebipụta na otu oge, na niile na agba na-e biri ebi n'otu oge, ọbọ a zuru okè agba mgbanwe.
Nke gara aga: rotary UV flatbed karama ngwa nbipute igwe
Osote: Multi Portable Size UV ​​Printer Inkjet Flatbed Printing Machine Na Rotary N'ihi Ewepụghị na sịlịnda Bottle enyemaka 3D Embossed
rotary UV flatbed karama ngwa nbipute m ...